ဆည်းဆာရိပ်နှင့် ပတ်သက်သမျှ – JQY's Blog
လူမှန်လျှင် တစ်နေ့ တော့ အိုရ နာရ သေရ မှာမလွဲ မသွေ ဖြစ် ပါသည် ။ မအို ပဲ နဲ့ လည်း သေချင် သေရ သည် ။ မနာ ပဲ နဲ့ လည်း သေချင် သေရ သည် ။ နောက် ဆုံးတော့ သေကို သေ ရမည် မည် ။ သေပြီး သော် လည်း ဘ၀ပြတ် သွား သည်မဟုတ်။ သံသရာ လွတ် ကြောင်း တရား အား မထုတ် သရွေ့ ၊ အားထုတ်သော် လည်း နိဗ္ဗာန်မရသေး သရွေ့ ၃၁ ဘုံ တွင် ကျင် လည် ကြ ရ အုံး မည် သာ ။ ဒါန သီလ ဘာဝနာ ……………. ဘာ ၀နာ က အမြတ် ဆုံး ပါ ။ ဘာ ၀နာ မပွား နိုင် လျှင် သီလ ကို ဆောက် တည် ပါ ။ သီလ မဆောက် တည် နိုင် လျှင် ဒါန ပြု ပါ ။
ဒါန ဟူသည် လူမျိုး ဘာသာမရွေး ပြု လုပ် သော ကုသိုလ် တစ် မျိုး ဖြစ် ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ များ အတွက် ဒါန မျိုးစေ့ သည် ယခု ဘ၀ အတွက် ၊ နောင် ဘ၀ အတွက် အထောက် အပံ့ ကောင်း ဟု ဗုဒ္ဓ မြတ်ဘုရား ဟောကြား ထား ခဲ့ ပါ သည် ။ နဲနဲလေး ပဲ လှူ လှူ ၊ များများ ပဲ လှူ လှူ မိမိ စိတ် သဒ္ဓါ ပြတ် ဖို့ သာ လို ပါသည် ။
ငယ် ရွယ် တဲ့ အချိန် နာ၍ မသေ သော် အို ၍ သေရ မည့် အချိန် သို့ မလွဲ မသွေ ရောက် ရှိ မည် သာ။ အကြောင်း ကြောင်း ကြောင့် စား ၀တ်နေရေး အတွက် အသက် ရှင် ရပ်တည် ဖို့ ခဲ ယဉ်းသော မိ ဘ ဘိုး ဘွား များ အတွက် လူ အိုရုံ သည် အမှန် တကယ် လိုအပ် ချက် တစ်ခု ဖြစ် ပါသည် ။ ထို လိုအပ် ချက် ကို အကောင် အထည် ဖေါ် ပေးသော အဖွဲ့ အစည်း ကတော့
“ ဆည်းဆာရိပ် ဂီလာန ဘိုးဘွားများ စောင့် ရှောက် ရေး အဖွဲ့ ” ဖြစ် ပါသည် ။ ရည် ရွယ်ချက် ကောင်းမွန်သော ထို အဖွဲ့ အား ကျွန်မတို့ (Myanmar Friends Day ) Admin များ မှ လှူဒါန်း လိုသော ဆန္ဒ ရှိ ပါ သည် ။
Member များ အနေ နှင့် ပါ ၀င် လှူ ဒါန်း လို ပါ က …
၁ ။ ။ ကိုစိုးဝင်းအောင်
၁၈၀/၁၈၂ ၊ ၄လွှာ ၊ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်းအလယ်၊
Feeling စားသောက်ဆိုင်အပေါ်ထပ်။ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
TEL. ၀၁-၂၉၃၁၆၃၊ ၀၁-၃၉၇၂၂၉
တနင်္လာ မှ သောင်္ကြာနေ (မနက် ၁၀နာရီကနေ ညနေ ၅နာရီ ) ရုံးချိန်အတွင်း
အိမ်ဖုန်း နံပါတ် …………၀၁ ၆၁၀၉၂၄
၂။ ။ မောင်ဘကြိုင်
သို့ mail ပို့ ၍ လည်းကောင်း
၃။ ။ အေးချမ်ဖြူ
၄။ ။ အိရင်း
လှူဒါန်း နိုင် ပါ သည် ။
စက်တင်ဘာလ ၅ ရက် နေ့ တွင် သွားရောက် လှူဒါန်း မည် ဟုရည်ရွယ် ထား ပါသည် ။
စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ နောက်ဆုံး ထား ၍ လှူဒါန်း ကြပါ ရန် ………….
ပထမဦးဆုံး အနေ နှင့်
၁ ။ ။ ပန်းသခင် (ထိုင်ဝမ် ) မှ ……………………………………………..၅၀, ၀၀၀ (ကျပ် ) ရရှိ ပါ သည် ။
`မွေးဖွားခြင်းသည် သေခြင်းတရားဆီသို့ ဦးတည်နေသော ခရီးလမ်း၏ အစ´ ဟူသော လူ့လောကသဘာဝတွင် အို၊ နာ၊ သေရေးနှင့် မလွဲမသွေ ရင်ဆိုင်ကြရမည်မှာ အမှန်တရားပင်ဖြစ်သည်။ ထိုရှောင်လွှဲ၍မရသော အကြောင်းတရားများနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရသူများတွင် ကုသိုလ်ကံကောင်းသူများအဖို့ ၎င်းတို့၏ ဘ၀နေ၀င်ချိန်အထိ မပူမပင် အေးချမ်းစွာ နေထိုင်သွားနိုင်ကြသော်လည်းကုသိုလ်ကံမကောင်းသည့် မိအို၊ ဖအိုများမှာမူ ဘ၀နေ၀င်ချိန် မရောက်ခင် အကြားဘ၀ကို ပင်ပန်းဆင်းရဲကြီးစွာ ဖြတ်ကျော်နေကြရရှာပါသည်။ အကျိုးပေးကံမကောင်းသည့် ဘိုးဘွားများအဖို့သား၊သမီး၊မြေးများနှင့်ပျော်ရွှင်နေချိန်တွင် ကံအကျိုးပေးနည်းလှသည့် ဘိုးဘွားများမှာပြုစုစောင့်ရှောက်မည့်သူများ မရှိ၍သော်လည်းကောင်း ဘိုးဘွားများအပေါ်မနှစ်မြို့သဖြင့် ငြူစူမှုမျိုးစုံအောက်တွင် သိမ်ငယ်စွာ ခံစားနေထိုင်ကြရကာဒုက္ခမျိုးစုံနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကင်နာစွာစောင့်ရှောက်မည့်သူကင်းမဲ့နေသောဘိုးဘွားများအတွက် မိသားစုသဖွယ်နွေးထွေးစွာ စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်သော သီးသန့်ရိပ်သာလေးတစ်ခု လိုအပ်လာပါသည်။ အကြာင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ခိုကိုးရာမဲ့နေကြသော ဂီလာနဘိုးဘွားများအား ကြင်နာစွာဖြင့် ၎င်းတို့ အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်သမျှ ကာလအပိုင်းအခြားအထိ၎င်းတို့အပေါ်တွင်နားလည်စာနာစိတ်၊သည်းခံစိတ်ဖြင့်ပြုစုယုယပေးမည့်ဆည်းဆာရိပ်´ဂီလာနဘိုးဘွားများထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြပါသည်။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရန်အတွက်အများပြည်သူစေတနာရှင်များ၏အကူအညီများလိုအပ်လျှက်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ဘိုးဘွားများအား နွေးထွေးသော လက်များဖြင့်ဖေးမကူညီကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
အဖွဲ့ဝင် အလှူရှင်တစ်ဦးမှ လှူဒါန်းသော အသင်းပိုင်မြေနေရာတွင် စေတနာရှင်များ၏ စေတနာရှင်များ၏ အလှူငွေဖြင့် အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်၍ လုပ်ငန်းစတင်ရန်၊ ထိုမှတဖန် အလှူငွေတိုးတက်မှုအပေါ်တွင်
အခြေခံ၍ မြေနှင့် အဆောက်အအုံတိုးချဲ့၍ ဂီလာနဘိုးဘွားများ ထပ်မံလက်ခံရန်။
(၁) ဂိလာန ဘိုးဘွားများ၏ လက်ရှိကျန်းမာရေး အခြေအနေနှင့် လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းကို ကြည့်၍ တစ်ဦးချင်စီ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဆရာဝန်၏ ညွန်ကြားချက်အတိုင်း ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းများနှင့် စေတနာရှင်များမှ
(၂) ဘိုးဘွားများ၏ ကျန်းမာရေးကို ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မှ အခါမလပ် ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်သကဲ့သို့ အမှုဆောင်အဖွဲ့မှလည်း နေ့စဉ် အလှည့်ကျ သွားရောက်ကြည့်ရှု၍ လိုအပ်ချက်မှန်သမျှ
(၃) ဘိုးဘွားများအတွက် အာဟာရပြည့်ဝ၍ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော အစာစအစာများကို စီမံကျွေးမွေးခြင်း၊ အသုံးအဆောင်၊ အ၀တ်အထည်နှင့်၊ နေရာထိုင်ခင်း စသည်တို့အား သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ
ထားရှိစေခြင်း၊ ဘိုးဘွားများ၏ ဘာသာဝင်အလိုက် ကိုးကွယ်ပွားများ အားထုတ်မှုကို
၎င်းတို့၏ ဆန္ဒအတိုင်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်။
“ ဆည်းဆာရိပ်ဘိုးဘွား ရိပ်သာသို့ သွားရောက် လှူဒန်းမည့်ရက် ကြေညာ ”
“ဆည်းဆာရိပ်ဘိုးဘွား ရိပ်သာ”သို့ မူလ ကြေညာထားသည့် ရက်အတိုင်း ( ၅.၉.၂၀၁၀ ) ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၅ ရက်နေ့ မြန်မာ သက္ကရာဇ်၁၃၇၂ခု ဝါခေါင်လဆုတ် ၁၁ရက်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်သွားရောက် လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ပါသည် ။
စုရပ် …………. ဘိုဘိုမင်း ( Bo BoMin)အအေးဆိုင်(ဗေလီတံတားအဆင်းဒဂုံမြို့နယ်ဘယ်
အမှတ် ၅၇ -A ၊ ဦးဝိစာရလမ်း ၊ စက်မှူ့ဇုံ
၃၄ – ရပ်ကွက် ၊ မြောက်ဒဂုံ ၊Tel – ၅၈၆၀၁၁ ၊ ၅၈၆၀၁၀ ၊ ၀၉ ၅၁ ၇၈၃၂၁ ၊ ၅၈၆၀၇၇
အချိန် …………နံနက် ၉း၃၀ အရောက်
အဲဒီတုန်းက ဘိုဘိုမင်းမှာ တွေ့ချိန်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဘိုဘိုမင်းမှ တဆင့် ကားငှား ၍ သွား ရောက်မည် ဖြစ်ပါသည် ။
မြန်မာ နိုင်ငံမှာ တခြားနိုင်ငံတွေ ထက်စာ ရင် လူအို (ဘိုး၊ဘွား)စောင့်ရှောင့်ရေးဂေဟာများ နည်းပါး နေပါ သေးသည်။ အသက်ကြီး လျှင်ကောင်းသည်ဖြစ်စေ ၊ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ သားသမီး များ နှင့် သာ နေထိုင် ကြ ပါသည် ။ နောက်ဆုံး ဒုက္ခရောက်လွန်း ၍ သာ သွားကြ ရသည် မည်သူမျှဘိုးဘွားရိပ်သာတွင် မနေချင် ။ မိသားစု နှင်သာ နေချင် ကြတာ လူ့သဘာဝ ပါ ။
ကျမတို့ ပထမ အကြိမ်သွား ရောက်စဉ်က အဖိုး အဖွားများ အား နေ့လည်စာထမင်းစားချိန် ဖြစ်ပါတယ် ။ ဆည်းဆာရိပ် ရှိစောင့် ရှောက်သူများသည်အဖိုးအဖွား တစ်ယောက်ချင်းစီ ကို ကြင်နာ စွာ ပြောဆို ၍ ထမင်း ကျွေးကြပါတယ် ။
အဖွား တစ်ယောက်ကို အမျိုးသမီး တစ်ယောက် မှ တတွတ်တွတ် နှင့် စကားတွေပြောပေမယ့် အဖွား ကတော့ ခေါင်းကိုသာ ခါရမ်း ပြနေပါတယ် ။ ကျမ လည်း ထိုအဖွားနားကို သွာပြီးတိုးတိုးလေး
“အဖွား ထမင်း မစားဘူး လား”
“အဖွားဘာစားချင်လဲ သစ်သီးတွေ ဘာတွေ စားချင်လား သမီးဝယ်ခဲ့ မယ်”
“မကျည်းသီး အမှည့်လား ”စိတ်ထဲ ယိုးဒယား မကျည်းချိုသီး အတောင့် လေးတွေ နောက် တစ်ခါ လာရင် ဝယ် ခဲ့မယ် စိတ်ကူး မိလိုက်တယ် ။ ထိုအခါ အဖွား မှ
“မဟုတ်ပါဘူး အထုတ်ကလေးတွေ နဲ့လေ ဆေးမကျည်း ”ထိုအခါ ကျမရီ (ရယ်)မိတယ် ။
“ဟုတ်ကဲ့ …သမီးတာဝန် ရှိတဲ့သူတွေ မေးပြီး ဝယ်ခဲ့မယ်နော် အဖွား” ဆိုတော့
“ဟွန့် သူတို့မေးရင် တသက်လုံးကျွေးမှာ မဟုတ်ဘူး ”တဲ့ (ပြုံးမိတယ်ပြောပုံလေးကို) .ကျမ လည်း အိလေး (အိရင်း) ကိုပြောပြတော့ အိလေး က အဖွား က ရောဂါများတယ် သွေးတိုးလည်း ရှိတယ် ဆေးမကျည်း က အရမ်းငံတယ်လေ အဲ့ဒါကြောင့် မကျွေးတာ ဖြစ်မယ် မေဖြူဆိုတော့ ကျမ တော်တော် သနား ပြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ် ။ အသေးစိတ်ဂရုစိုက်သော ဆည်းဆာရိပ် ပရဟိတ လုပ်ငန်း ကိုလည်း ချီးကျူးမိပါတယ် ။
အိမ်ထောင်မကျသောကြောင့် လည်းကောင်း၊ အိမ်ထောင်ကျသော်လည်း သားသမီးမထွန်းကားသော
ကြောင့် လည်းကောင်း ၊သားသမီး ထွန်းကားသော်လည်း မိဘများထက်ဦးစွာ ကွယ်လွန်ခြင်း သို့မဟုတ် မိအို ဖအိုများ ကို ပြုစု နိုင်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း စသော့ အကြောင်းကြောင်း ကြောင့်ရောက်ရှိလာ ကြ သည် ။ မည်ကဲ့ သို့သော အကြောင်းကြောင့် ရောက်လာသည်ဖြစ်စေဘိုးဘွားရိပ်သာ သည် အဖိုး အဖွားများအတွက် နေဝင်ချိန် နောက်ဆုံး အားကိုးရာသာဖြစ်သည် ။
ထိုကဲ့သို့ သနားဖွယ်ရာ အဖိုး ၊ အဖွား များ ကို နွေးထွေး ကြင်နာစွာ ပြုစုပေးသော ဆည်းဆာရိပ်ဘိုးဘွား ရိပ်သာ စောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာ ကို အမြန်ဆုံးအောင်မြင် ပြီးမြောက်ရေး အတွက် လက်မနှေး ပဲ ပါဝင် လှူဒါန်း ကြပါ ရန် …………။
ဒီရက် ကို စောင့်နေရတာ ကြာပါ ပြီ ။ စောင့်နေရတာ တောင် ရင်တထိတ်ထိတ် နဲ့ပါ ။ သတ်မှတ် ထားသည့် ရက် မတိုင်ခင် ၂ ပတ် အလို ထိ အလှူငွေ က ၃ – သိန်း ကျော်သာ ရရှိပါသေး သည် ။ ဒါပေမယ့် တကယ့် လှူ မယ့်နေ့စာရင်းပိတ်တော့ ၆၂၀ ၀၀၀ ( ၆ သိန်း ၂ သောင်း ) ရရှိပါသည် ။ ကျမ ပျော် ရွှင်ပါတယ် ။ အားလုံး လည်း ပျော် ရွှင် ကြပါ တယ် ။ ချိန်းဆို ထား သော နေရာမှ လူစုံသော အခါ ကိုသီဟ ကား တစ်စီ ၊ နောက်ထပ် ကား ၂ စီး ငှား ၍ ဆည်းဆာ ရိပ် သို့ ချီတက် ခဲ့ပါတယ် ။ဟိုရောက်တော့ တာဝန် ရှိသူ များ စောင့်ကြိုနေ ပါတယ် ။
ကိုစိုးဝင်းအောင် နှင့် ကိုသီဟ မှ တစ်ချပ် လျှင် ၁၅,၀၀၀ တန် ကော်ဇော တစ်ချပ် စီ သီးသန့် လှူဒါန်း ပါသည် ။ အေးချမ်းဖြူမှ Asia အချိုရည် ၂ ကဒ် ၊ ကော်ဘရာမှ Max အချိုရည် ၂ ဗူး ၊Ovaltine ၂ ဗူး ၊ ပေါင်မုန့် ၂ လုံး ၊ Kao ဆပ်ပြာခဲ ၊ ဖုန်းလေး မှ လင်ဇီး လိမ်းဆေး ၁ ဒါဇင် သီးသန့် လှူဒါန်း ။
အလှူ ငွေများ လှူဒါန်း ပြီးသော အခါ တာဝန်ရှိသူ အဘ မှ ကျေးဇူးတင် စကား ထပ် မံပြောကြား ၍ စကား စမြည် ပြောကြည့် ရာ တစ်ခါတစ်ရံVolunteer များလိုအပ်ကြောင်း ပြောပါ တယ် ။ ကျမ လည်း ဆက် သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ် များ ပေး၍ တတ်နိုင် သလောက် လူ စုပြီး လာမည့် အကြောင်းပြောကြားခဲ့ ပါသည် ။ member များအနေဖြင့် အားလျှင် Volunteer အနေနှင့်လိုက်ပါစေချင် ပါသည် ။ ကျမ ချောကလက် မြို့တော် ကိုကျေးဇူးတင် စကားပြောချင်ပါတယ် ။ အားလုံး သိ ကြ ပြီးတဲ့အတိုင်း မြို့စားလေး သည် အရင် က ကျမ တို့ Myanmar Friends Day Adminဟောင်းတစ်ဦး ပါ ပဲ ။ လှူဒါန်း မည့် ရက် ရောက်တော့ Chocolate Myotaw မှ Adminတစ်ဦး ဖြစ်သူ Chocolate Cupid လေး နှင့် member တစ်ဦး ဖြစ်သူခင်မေခ တို့ ၂ဦးရောက် ရှိ လာပါတယ် ။ မြို့စား လေး မှ သွားရောက် ရန် request လုပ် ၍ ပါတဲ့ ။ ငွေများ ကိုလည်း လှူဒါန်း သွားပါ တယ် ။ အဲ့ဒီအတွက် Chocolate Myotaw ကို ကျေးဇူး အထူး တင်ကြောင်း ပြောကြားလို ပါတယ် ။နောင်ကို လည်း အခုလို ပဲလာရောက် ပူးပေါင်း ပေးပါလို့တောင်းဆို ပါ တယ် ။
ကျမ တို့ Myanmar Friends Day ရဲ့အောင် မြင်မှူ့ မှတ်တိုင် တစ်ခု စိုက် ထူ နိုင် ပြန်ပါပြီ။လိုအပ်သော နေရာ တွင် လှူဒါန်းရ ခြင်း ၊ ထူးခြားသည် မှာ တစ်ချို့ ကလေးများမတွေ့ဘူး ပဲ နှင့် ရောက်ရှိ လာ ကြပြီး တခဏ အတွင်း ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ပျော်ပျော် ရွှင် ရွှင် ဖြစ်သွား ကြတာ ပါ ပဲ ။ အရမ်းပျော် ဖို့ကောင်း ပါတယ် ။ သင် ပြုမူသော ဒါန ၊ သီလ ၊ ဘာဝနာ ၊ စိတ်စေတနာ ၊ သင့်ရဲ့ဖြူစင်မှူ့  ၊ သင် လုပ် ဆောင်ခဲ့ သော မွန်မြတ်ကောင်းမွန် မှူ့ များ ကိုတစ်ပါးသူ များ မှ နှူတ် နှင့်သော်လည်းကောင်း ၊ စာနှင့်သော် လည်းကောင်းဖျက်ဆီး လို့ မရ ပါဘူး ။ အချိန်တန် လျှင် ယိုယွင်း ပျက်စီး မည်ဖြစ်သောခန္ဓာကိုယ် ကို သာ ဖျက်ဆီး ၍ ရနိုင်ပါသည် ။ မိမိ ကောင်းမွန် စွာလုပ်ဆောင်ခဲ့ သော အရာ အားလုံးတိ်ု့ သည် သင် ၏ နောက် သို့ လင်းလက် တောက်ပ စွာ နှင့်လိုက်ပါနေ အုံးမည် ဖြစ်ပါသည် ။ သင်၏ နောက်သို့ ကောင်မွန် မှူ့လေး တွေ ခေါ်သွား မလာ၊ မကောင်းမှူ့လေးတွေ ခေါ် သွားမလား အရာအားလုံး က သင့်ရဲ့စိတ်ထားပေါ်မှာ ရှိနေပါတယ် ။
အေးချမ်းဖြူ ရဲ့ ပိုစ့်ကို ယူထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါက Myanmar Friends Day ဆိုက်မှာ အက်ဒမင်လုပ်ပြီး အက်ဒမင်မှ အနားယူစဉ် ပိုစ့်များ အကုန် ဖျက်သွားသဖြင့် ဓာတ်ပုံများကို ပြန်ရှာလို့ မရသေးဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။